မျက်လုံးမိတ်ကပ်စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူ - China Eyes မိတ်ကပ်ထုတ်လုပ်သူများ
Private Label Makeup Eyeshadow 35 ရေစိုခံနိုင်သော Matte earth tone Pearlescent Sequined Glitter Eyeshadow Palette
ပစ္စည်းအမှတ် J0877 အမှတ်တံဆိပ် Jinfuya အမှတ်တံဆိပ်ပြုလုပ်ရန် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါ။ အရောင် ၃၅ မျိုး၊ အရောင်များ၊ အရောင်တောက်ပသောအရောင် ၃၅ မျိုးရှိပြီးအဆင်ပြေသည်။ အဆင်ပြေလွယ်ကူသည်။ မိတ်ကပ်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အရိပ် ၃၅ ခုသည်သင့်တော်သောအသားအရေနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ နေ့ရောညပါအသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောမွေ့ယာများနှင့်တောက်ပသောမျက်လုံးအရောင်တောက်ပသည်။ Net Content 305g / pallet အသုံးပြုမှု Lady's Eyes Beauty Makeup ။ သက်သတ်လွတ်နှင့် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သော OEM အကြောင်းကတိပေးသည်။
စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်တာရှည်ခံအရည် Glitter Eyeshadow 14 Colors ရေစိုခံအမြင့်ဆုံး Pigmented တောက်ပသောသတ္တုအရည် Eyeshadow
ဒါဘာလဲ ? Liquid Eyeshadow သည်မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုရှိပြီးမြင့်မားသော sparkle အရည်အရိပ်တစ်ခု ဖြစ်၍ သင့်ကိုကြည်လင်သောအရောင်အသွေးနှင့်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုပေးစွမ်းသည်။ မျက်လုံးအရိပ်အမှုန့်များထက်သဘာဝကျပြီးအရေပြားနှင့်ထိတွေ့မှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဝတ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်ဖော်စပ်ထားသည့်တောက်ပသောတောက်ပသောအလင်းရောင်ရှိသည့်မျက်လုံးအရင့်ဖြင့်မျက်လုံးအကြည့်ကိုရယူပါ။ သို့မဟုတ် Laye ...
Shimmer Liquid Eyeshadow သက်သတ်လွတ်မိတ်ကပ်မျက်လုံးအလှကုန် 18 အရောင်များ Private Label Shinning Liquid Glitter Eye shadow
ဒါဘာလဲ ? မျက်စိအရင့်အရောင်နှင့်တောက်ပမှုပြည့်ဝသောနက်ရှိုင်းသောအစိုင်အခဲ၊ Fine texture သည်ရွေးချယ်နိုင်သောအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ Glitter အရည်မျက်လုံးအရိပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းဝတ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အခြားအရိပ်များနှင့်ရောနှောရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အလွန်ထိရောက်သောခံစားမှုအစွန်အဖျားနှင့်အတူ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ချောမွေ့စွာစီးဆင်းသွားပြီးလျင်မြန်စွာခန်းခြောက်စေသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆွဲဆောင်မှုရှိသော Eyeliner & မျက်လုံးကိုဖန်တီးသည်။